मार्च बर्थस्टोन - एक्वामारिन - रक्तपाण - नयाँ अपडेट २०२१
Aquamarine र रगत मार्चका लागि दुई जन्मस्टोन गहना रंग छन्। एकले निलो आकाश र color र शान्त पानी उत्पन्न गर्दछ भने अर्कोले स्वास्थ्य र शक्ति प्रतिनिधित्व गर्दछ।
मार्च बर्थस्टोनको अर्थ के हो?
एउटा जन्मस्टोन एउटा रत्न हो जुन मार्चको जन्म महिनासँग सम्बन्धित छ: Aquamarine र रगत
मार्चको बर्थस्टोन रंग के हो?
मार्च बर्थस्टोन कहाँ पाइन्छ?
मार्च बर्थस्टोन गहना के हो?
मार्च बर्थस्टोन कहाँ पाउन सकिन्छ?
मार्च जन्मस्टोनका राशि चिन्हहरू के हुन्?
Aquamarineमार्चको बर्थस्टोन, समुद्रको रंगहरु पैदा गर्छ। गहिरो हरियो-नीलो देखि हल्का, हल्का हरियो निलो। यो गहना यसको ज्वलन्त उपस्थिति र यसलाई प्रदान गर्दछ र of्ग को पप को लागि परिचित छ।
रक्तचापमार्चको बर्थस्टोन, गाढा हरियो रत्न ढुstone्गा फलामको अक्साइडको रातो स्पटको साथ। सामान्यतया चट्टानमा वा नदीको किनारमा ढु pe्गाका रूपमा सम्मिलित पाइन्छ, यो रत्नको लागि प्राथमिक स्रोतहरू भारत, ब्राजिल र अष्ट्रेलिया हुन्।
Aquamarine, मार्चको बर्थस्टोन, एक समृद्ध रंग छ र लामो समयदेखि युवा, स्वास्थ्य र आशाको प्रतीक हो। यसको मंत्रमुग्ध रंग फिक्का देखि गहिरासम्म नीलो र समुद्रको सम्झना गराउँछन्।
यो रगत जन्मस्टोन सामान्यतया एक हो गाढा हरियो cabochon समावेश गर्दछ लाल आइरन अक्साइड को दाग, "रगत" कि पहननेहरु लाई स्वास्थ्य र शक्ति ल्याउँछ।
Aquamarine जन्मस्थानहरू केन्या, माडागास्कर, नाइजेरिया, जाम्बिया र मोजाम्बिकका साथै अफ्रिकाका अन्य ठाउँमा खन्याइन्छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका, भियतनाम र कम्बोडिया पनि
को मूल जम्मा रगत जन्मस्टोन अस्ट्रेलिया, ब्राजिल र भारतमा खानी गरिन्छ र सामान्यतया नदीको किनारमा ढुb्गाको रूपमा भेटिन्छ वा चट्टानहरूमा इम्बेड गरिएको।
बर्थस्टोन गहनाहरू बनेको छ Aquamarine र रगत। हामी मार्चको बर्थस्टोन गहनाको घण्टी, ब्रेसलेटहरू, झुम्का, हार र अन्य धेरै बेच्दछौं।
त्यहाँ राम्रो छ Aquamarine र रगत हाम्रो पसलमा बिक्रीको लागि
Aquamarine, मार्च गहना को बर्थस्टोन, वसन्त र गर्मी को अलमारी को लागी एक सुन्दर उच्चारण बनाउँछ। एक्वामारिनले क्रिस्टलीय पानीको शुद्धता, र समुद्रको रमाईलो र विश्रामको कुरा गर्दछ। यो शान्त छ, सुखदायक, र सफा छ, र सत्य, विश्वास र छोड्ने प्रेरणा दिन्छ। पुरानो विद्यामा, Aquamarine Mermaids को खजाना मानिन्थ्यो, र नाविकहरूले भाग्य, निर्भयता र सुरक्षा को एक तावीज को रूप मा प्रयोग गरीन्थ्यो। यो अनन्त युवावस्था र आनन्दको एक ढु stone्गा पनि मानिन्थ्यो। आज यो पानी, यात्रा, वा नजिकै यात्रा गर्ने सबैलाई सुरक्षित गर्दछ, र स्पष्ट र हार्दिक संचार को च्यानल खोल्दछ।
साहस, शुद्धिकरण, र महान बलिदान को एक ढु stone्गा, रगत यसको उपचार गुणहरूको लागि प्रयोगको लामो इतिहास छ। यो एक हदसम्म जादुई ढु stone्गा मानिन्थ्यो किनभने यसको नकारात्मक उर्जा ट्रान्समेट गर्न र एकै स्थानमा यसलाई सुरक्षित गर्दा खाली ठाउँको क्षमताको कारण। पुरातन संसारमा, रगतका पत्थरहरू ज्यास्परहरूको सबैभन्दा सुन्दर मानिन्थ्यो, गहिरो, भूमी हरियो रत्न उज्यालो रातो दागले भरिएको थियो। सूर्य पत्थर, र पछि ख्रीष्टको ढुone्गा भनिन्छ, यसको उर्जाले रगतको शुद्धता बोक्छ र अन्तर्निहित जीवन, जन्म, जीवनशक्ति र शक्ति, जोश र साहसको कुरा गर्दछ। ताईजको रूपमा यो दुबै रहस्यमय र जादुई छ, र यसको सद्गुण सुरक्षात्मक र पोषणकारी छ।
मीन र मेष पत्थर दुबै जन बर्थस्टोन हुन्
तपाई जो मीन र मेष हुनुहुन्छ। Aquamarine र रगत मार्च १ देखि 1१ सम्मको ढु stone्गा हुन्।
मार्च 1 मीन Aquamarine र रगत
मार्च2मीन Aquamarine र रगत
मार्च3मीन Aquamarine र रगत
मार्च4मीन Aquamarine र रगत
मार्च5मीन Aquamarine र रगत
मार्च6मीन Aquamarine र रगत
मार्च7मीन Aquamarine र रगत
मार्च 8 मीन Aquamarine र रगत
मार्च9मीन Aquamarine र रगत
मार्च 10 मीन Aquamarine र रगत
मार्च 11 मीन Aquamarine र रगत
मार्च 12 मीन Aquamarine र रगत
मार्च 13 मीन Aquamarine र रगत
मार्च 14 मीन Aquamarine र रगत
मार्च 15 मीन Aquamarine र रगत
मार्च 16 मीन Aquamarine र रगत
मार्च 17 मीन Aquamarine र रगत
मार्च 18 मीन Aquamarine र रगत
मार्च 19 मीन Aquamarine र रगत
मार्च 20 मीन Aquamarine र रगत
मार्च 21 मेष Aquamarine र रगत
मार्च 22 मेष Aquamarine र रगत
मार्च 23 मेष Aquamarine र रगत
मार्च 24 मेष Aquamarine र रगत
मार्च 25 मेष Aquamarine र रगत
मार्च 26 मेष Aquamarine र रगत
मार्च 27 मेष Aquamarine र रगत
मार्च 28 मेष Aquamarine र रगत
मार्च 29 मेष Aquamarine र रगत
मार्च 30 मेष Aquamarine र रगत
मार्च 31 मेष Aquamarine र रगत
हाम्रो रत्नको पसलमा बिक्रीको लागि प्राकृतिक मार्च बर्थस्टोन
सगाई रिंगहरू, नेकलेसहरू, स्टड इयररिंगहरू, ब्रेसलेटहरू, पेंडन्टहरू ... को रूपमा हामी अनुकूलित मार्च बर्थस्टोन गहना बनाउँछौं। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस उद्धरण को लागी।